Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay arrimo muhiim iyo xasaasi Ah | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay arrimo muhiim iyo xasaasi...
Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay arrimo muhiim iyo xasaasi Ah
Madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah, gaar ahaan doorashada 2020/21 iyo sidoo kale matalaadda gobolka Banaadir.
Xasan Sheekh ayaa si aad ah u dhaliilay warbixinta guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka, wuxuuna shaaciyey in laga damacsan yahay muddo kororsi hor leh.
Sidoo kale wuxuu dhanka kale soo dhaweeyey go’aankii Golaha Shacabka ee ku aadanaa ansixinta matalaadda gobolka Banaadir oo Aqalka Sare ku yeelan doono 13 xubnood.
Halkan hoose ka aqriso hadal-jeedinta madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamed.
Waxaan marka hore hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee u dabbaaldageysa usbuuca xorriyadda Soomaaliyeed. Sida maalinta xorriyadda ee gobollada waqooyi iyo walaalaheen reer Jabuuti iyo munaasabadda soo socota ee 1da Luulyo ee lixdanguuradii ee xorriyadda iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliya.
1. Madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxay muddo dheer ku faanayeen iney wada joogeen muddo ku dhaw AFAR sano.
Hase yeeshee maalin ka mid ah muddadaas madaxweynuhu kama hadlin wax doorasho la yiraa. Haddaba, ninkii doorasho laga sugayay ee aan ka hadlin muddadaas dheer sow shalay afkiisa af aan ahayn looguma hadlin? oo GMDQ nama dhihin Madaxweynaha iyo dhammaan hay’adaha dastuuriga ah (Madaxweynaha, 2da aqal ee baarlammaanka iyo guddoonkooda, afar sano howl doorasho maalinne ma soo hadal qaadin laakin doorasho wey qaba karaan haddii loo kordhiyo muddo xiloodkood ku dhawaad SANNAD amd ka badan. Arrinkaasi “WAA KAAF IYO KALA DHEERI”!
2. Waqtiga yar ee ka haray xilli-xileedkaaga hal arrin ayuu ku filan yahay. Kaas oo ah inaad u istaagto in doorashada loo helo heshiis siyaasadeed si awoodda xukunka si nabad ah loola kala wareego ama si sharci ah mar kale laguugu soo doorto.
Walaalayaal, doorashadii ugu dambeysay ee dimoqraadiga ahayd ee dalkaan ka dhacday oo ay ka soo wareegtay in ka badan 50 sano, qaladaad ka dhacay awgeed, waxay dalkaan iyo dadkiisa u keentay ma hadho siyaasadeed oo ilaa hadda taagan. Sidaas daraadeed, Soomaaliya ma xammili karto qalad kale oo taariikhi ah oo dhaca xilli ay ka soo bogsaneyso jahawareer muddo dheer ay la soo tacaaleysay.
Sidaas daraadeed, qofka ama kooxda maanta diiddan wadatashi siyaasadeed oo la gaarayo heshiis siyaasadeed oo wada-oggol ah waa QARAN DUMIS IYO DOWLAD DIID, ha ku soo gabbado GMDQ ama ha soo mare jid kale e.
Waxaan madaxweynaha JFS ugu duceynayaa in Ilaahey tubta toosan iyo talada toosan waafajiyo